Ukudla ezimbizeni nge amazambane abancane: zokupheka ngesithombe. Ukudla ezimbizeni namazambane abasha, ama-aubergini, ukhukhamba namakhowe
Indlu yasekhaya Ukupheka
Ukudla ezimbizeni namazambane abancane: zokupheka okumnandi
Abasekeli bokudla okunomsoco bayothola ukudla okulula - inyama ehlwabusayo ezimbizeni ezinamazambane abasha. Ngenxa yokuphuza ehhavini, imifino inezinambitheka ezicebile futhi igcwele ama-herbs nezinambuzane ezibabayo. Ngingasho yini ukuthi ukunambitheka kokuthandwa kwamakholishi okwenziwe esitokisini futhi ebhodweni kuhlukile? Ungabona lokhu ngokwenza isidlo sangokwesibhakabhaka sokupheka ngendlela entsha.
I-recipe ye-classic yokuhlobisa imifino enenyama enomsoco
250 g we-rump yamathole;
amazambane abasha - 0.5 kg;
2 izaqathe kanye nenhloko ephakathi ye-Yalta anyanisi;
i-chickpeas encane noma i-peas ekheniwe;
usawoti, ingxube yepelepele, ama-herbs aqoshiwe.
Iseluleko: ukuthi inyama embizeni enezambatho ezincane iba yiphunga elimnandi kakhulu futhi elimnandi, nquma ama-peas of pepper obomvu namnyama emanzini, bese uwafaka ngesidlo.
Izitsha eziningi kuhhavini ezivela kumazambane ebhodweni zilungiswa ezihlukahlukene zamazambane asendulo. Ukulungiselela ukuhlobisa okufanayo nemifino emincane kuzosindisa isikhathi esiningi umnikazi wendlu, ngoba ngokubhaka kuhhavini, amazambane akufanele ahlanzwe. Hlanza izilimo eziyizigaxa kahle bese usula ngecala elibi lesiponji.
Ebhokisini lokusika, nquma i-veal yageza futhi yomiswe ngesikhumba sephepha. Fry izingcezu zenyama ngokushisa okukhulu cishe imizuzu engu-2-3 ohlangothini ngalunye. Sincoma ukusebenzisa i-pan engekho yokunamathela yokudoba (lokhu kuzokuvumela ukuba unciphise inani lamafutha ekuhlotsheni).
Iseluleko: uma uhlela ukunikeza ingane isitshalo semifino ebhakabhaka, upheke isembozo ngesikhumba sonke kusengaphambili.
Sika u-anyanisi ohlutshiwe kanye ne-izaqathe, bese uwagcina kuze kube yilapho igolide elikhanyayo limibala. Sincoma ukuthi ungagcoli i-pan yokudoba emva kokufisa inyama, kodwa ukushisa imifino ngqo kuyo.
Ngezansi kwezingubo zibeka izingxube zokubhakabhaka okuthosiwe, amazambane ekhoneni, nasezingxenyeni eziphezulu ze-veal. Sika amazambane amakhulu ama-2-3 amaqabunga, ukuze zonke izithako ziphekwe kanyekanye.
Ulwazi oluwusizo: ungafaki amafutha omquba noma amanye amafutha ezitsha ze-ceramic. Ukuqakatheka kokubhaka emabhokisini ukukhipha inyama emcimbini wemifino ngejusi layo.
Thela umhluzi obilisiwe obilisiwe kwisitsha ngasinye sinenyama enambithekile namazambane abasha.
Thela kuzo zonke izinongo ezidingekayo nezinongo ezizithandayo esitsheni enezithako. Beka isidlo kuhhavini imizuzu engu-40-50.
Izimbiza nge inyama, amazambane kanye ukhukhamba oqoshiwe
Ngenxa yokwengezwa kwamakhukhamba, isidlo sinomusa ohluke ngokuphelele. Ukukhanya okumnandi, okumnandi kugcizelela ijusi yenyama, okwenza ukuhlobisa kube mnandi kakhulu.
amazambane - izilimo eziyizigaxa eziyi-10 eziphakathi;
ingulube - 0,5 kg;
I-anyanisi ye-Crimea - izingcezu ezingu-3;
utamatisi unamathela - isobho se dessert;
ukhilimu omuncu - ama-3-4 wezipuni nge-slide.
Hlanza ucezu lwenyama, owomile, ususe amafilimu uphinde ususe ama-tendon. Sika sibe yimichilo emincane futhi ibe mnandi kakhulu. Letha ingulube ukunambitha.
Hlanganisa u-anyanisi nama-izaqathe epanini lokuthosa. Engeza amazambane uthathe amabhulashi amancane kuwo, futhi ekupheleni kokuthosa - usawoti kanye nepelepele.
Ngaphansi kwesitsha sokubhaka, faka amakhokhamba amaningi, bese ungenqamuzana yenyama (kanye nejusi eyakhiwe ngesikhathi senqubo yokudoba). Thela imifino ibe yizimbiza.
Dissolve in ingilazi yamanzi abilisiwe utamatisi unamathela kanye ukhilimu omuncu. Gcoba i-sauce, bese uwuthululela ezitsha zokumelana nokushisa kwezinye izithako zokuhlobisa. Beka kuhhavini elushisayo. Ngemuva kwemizuzu engu-40 isidlo esinambitheka esiphundu siyobe sesilungele.
Ukudla ezimbizeni ngamazambane ama-fresh and aubergines
Ama-eggplants ajwayelekile kakhulu asetshenziswa abesifazana ukupheka ukuhlobisa. Njengoba ulungiselele ukudla okunamnandi ebhodweni lokubhaka, uzobona ukuthi lo mkhiqizo uhlangene ngokuphelele namazambane abasha kanye nanoma yimiphi imikhiqizo yenyama. Njengoba izithako ezengeziwe ungasebenzisa ummbila, iminqumo. Ingulube kanye nemifuno ihlanganisa kahle kakhulu.
ingulube noma izinkukhu zenkukhu - 0.5 kg;
amazambane - 6 izilimo eziyizigaxa eziphakathi;
isitshalo seqanda - ucezu olulodwa;
cherry utamatisi - 250-300 g;
anyanisi - amakhanda amabili aphakathi;
i-garlic - ikhanda elincane;
i-sunflower noma amafutha omnqumo (okwenzela izithako);
usawoti, ingxube yepelepele emnyama nokubomvu - ukunambitha.
Geza imifino ehlutshiwe. Sika ama-eggplant namazambane nama-utamatisi amadayisi, ama-anyanisi - amasongo amahhafu, ingulube - amabhlogo amancane.
Ithiphu: nquma isitshalo seqanda ngokucophelela ufafaze usawoti usawoti futhi uthumele esiqandisini isigamu sehora. Ngemuva kwalokho, hlambulula kahle futhi ungakhohlwa ukucindezela. Lokhu kuzokhulula umkhiqizo wokufutheka, okungahle kuphazamise ukunambitheka kwesidlo esilungisiwe.
Fry izingcezu zenyama esikhungweni scallop. Ekupheleni kokudoba, engeza izinongo kanye namakhambi. Isibonelo, ingulube ihlangene kahle negatsha le-rosemary elisha, nenkukhu - ne-cardamom.
Fry kancane ama-cubes amazambane, anyanisi nesitshalo seqanda. Njengoba imikhiqizo inezikhathi zokupheka ezihlukene, i-othosiwe kakhulu.
Yakha okuqukethwe izitsha ze-ceramic: beka izingqimba ze-ngulube nemifino. Thepha isigamu indebe yamanzi ashisayo ebhodweni ngalinye, bese ubeka utamatisi oluncane.
Pheka isidlo ngaphansi kwesembozo sehhafu yehora. Lapho ukhonza, ufafaza ngokukhululekile imifino eqoshiwe kanye negalikhi eqoshiwe.
Inyama evuthayo embizeni enezambatho ezincane namakhowe
inkukhu yenkukhu noma ithanga-200 g;
amazambane - 5 nezilimo eziyizigaxa eziphakathi;
ama-champignon - 200 g;
Ushizi onzima - 150 g ngendlela efakwe;
ukhilimu omuncu - izipuni ezimbili ezine-slide;
usawoti, umnyama omnyama kanye nepelepele elimnandi.
Ngaphansi kwezimbiza zobumba zokubhaka, faka inyama ebomvu elicwecwe noma isifuba esikhethiwe ngezicucu ezingahleliwe.
Fry the amakhowe endaweni emnandi i-hue kanye nendawo endaweni izingcezu fried yenyoni. Uma ufuna ukwengeza iphunga lama-anyanisi othosiwe endle, gcina amasongo anyanisi namakhowe.
Gcwalisa izimbiza phezulu ngezingcezu ezincane zamazambane aluhlaza. Uma unquma ukusebenzisa amazambane ahlanzekile, usike emibuthanweni encane.
Hlanganisa ukhilimu omuncu ngamanzi amancane nezinongo, bese uthele i-sauce ingxenye engena ebhodweni ngalinye.
Phezulu ngama-flakes we-cheese, futhi uthumele ukuhlobisa kuhhavini ngesigamu sehora. Ngemva kwesikhashana, inyama ezimbizeni namazambane nama-mushroom anomsindo uyobe esilungele.
Ukudla ezimbizeni nge amazambane amancane: iresiphi yevidiyo
Lungisa ukudla ngokushesha futhi kalula
Ikhofi yase-Ireland: umlando nokupheka
Ukupheka kwezitsha ezintsha zangonyaka zoNyaka Omusha
Amaphikishi for izitsha ushizi
Izindlela zokupheka eziphekwe ekhaya
Indlela yokupheka i-saumoni ehhavini ngendlela efanele futhi enhle
Inkukhu ngembewu ye-sesame
Isibindi ku-ukhilimu omuncu
Ukwelapha ubuhlungu emakhambi omuntu ohlangene ngamadolo
Ikhekhe ne-poppy ikhekhe
Ukuqagela ukuthi ubani esithombeni? Namuhla, lo ngumculi odumile kakhulu wesifazane eRussia
Owesifazane onomntwana ngemuva kwesahlukaniso
Amafutha e-Castor okwehla kwesisindo
Umculi uStas Kostyushkin
Pumpkin cream brulee
Ikhekhe elimnandi nge-apula
Amapheya aluhlaza ewayini ne-Mascarpone
Ukuhlakanipha komzwelo, amasu
Indlela yokusebenzisa i-eyelashes yamanga
Izitayela ezintsha ze-Fashion 2010
Pizza "Izinkathi ezine"